भूपेन्द्र हत्यामा अर्को ‘ट्विस्ट’ : सिद्धार्थ होटेलमा दुई पेस्तोल फेला, बर्दियामा मोटरसाइकल भेटियो
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का २३ वर्षीय भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा अर्को ‘ट्विस्ट’ आएको छ । प्रहरीले भूपेन्द्रको हत्याको समयमा प्रयोग भएका दुई मोटरसाइकल बर्दियाबाट बरामद गरेको छ ।
प्रहरीले सो रिसोर्टका सञ्चालक अतिश थापालाई पनि पक्राउ गरेको छ । अतिशले घटनामा संलग्नहरूलाई भाग्न सहयोग गरेको देखिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
यस्तै, कैलालीको टीकापुरस्थित सिद्धार्थ होटेलबाट प्रहरीले दुई पेस्तोल बरामद गरेको छ । बरामद भएको पेस्तोल घटनामा फरार रहेका नवीन रावल समूहको भएको प्रहरी बुझाइ छ ।
होटेल संगम चिसापानीका सञ्चालक नवीन रावलको योजनामा खुकुरी प्रहार गरेर उनको हत्या भएको प्रहरीले दाबी गर्दै आएको छ । नवीन हाल फरार छन् ।
नवीन टीकापुर र लम्की क्षेत्रमा लामो समयदेखि गुन्डागर्दी र विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । हत्यामा संलग्न आरोपमा १६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भूपेन्द्रमाथि आर्यन देवकोटाले चक्कु प्रहार गरेको देखिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भूपेन्द्रबाट आफूहरूको सूचना चुहिने डरले नवीनको समूहले उनको हत्या योजना बनाएको हुन सक्ने प्रहरी आशंका छ ।
काठमाडौंमा बस्दै आएका बडुवाल दसैँ मान्न घर फर्किएका थिए । तिहारपछि उनी काठमाडौं फर्किने योजनामा रहेकै बेला उनको हत्या भएको थियो ।
खातामा पैसा नहुँदा पनि तीन करोड चार लाख रुपैयाँकाे चेक दिने व्यक्ति पक्राउ
युवा सं‌घका नेता श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न दुईजना पक्राउ, हत्या गर्नेहरु उनकै नजिकका साथी !
घरमै सुत्केरी भएकी गङ्गाको रक्तश्रा’वपछि झाँक्रीमा लैजाँदा मृ’त्यु
इच्छाराज ठगी प्रकरण : अख्तियारका आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यदेखि पूर्वप्रधानसेनापति रुकमाङ्‍गत कटवालसम्म यसरी ठगिए